The ọhụrụ protocol Phantom ga mpi na Lightning Network - Blockchain News
The ọhụrụ protocol Phantom ga mpi na Lightning Network
The creators nke ogbugba ndu SPECTER na mọ Jonathan Sompolinski na Aviv Zoha kọwara ọhụrụ protocol na a akwụkwọ bipụtara nke a izu. The Phantom protocol kwere nkwa pụrụ ịdabere na nkwenye nke azụmahịa “na netwọk ọ bụla bandwit”, gụnyere smart contracts. The ọhụrụ mmepe dabeere na aga ngwọta si na otu iwu, SPECTER, nke departs si omenala ngọngọ Ọdịdị nke bitcoin na-eji ọzọ scalable “eduzi acyclic ngọngọ grafụ” (blockDAG). Researchers na-akọwa na nkà na ụzụ dị ka “na generalization nke Satoshi yinye, nke dị mma ruru eru n'ihi na a usoro nke ngwa ngwa ma ọ bụ nnukwu blocks.”
N'adịghị ka offline ngwọta dị ka Lightning Network, mgbe azụmahịa na-eduzi na ihe tinye-na na netwọk, Phantom awade a ahịa dabeere ngwọta na-enye gị na-ahapụ ihe niile transactional data na blockroom.
Dị ka ndị, isi distinguishing ikpehe Phantom bụ na ọ na-eme ka o kwe ha omume linear ịtụ nke nkanka, nke SPECTER ekweghị ka. Maka nke a, ọ na-eji “anyaukwu algọridim” na blockDAG n'elu ikpo okwu na ọdịiche nkanka N'ịbụ “n'eziokwu” ọnụ si “ndị na-abụghị na-akwado” ọnụ na adapụ Ngwuputa protocol. Dị ka mmepe dee, ọdịiche a na-enye ohere niile “n'eziokwu ọnụ” iru a otutu mmadu kwenyere. N'idozi nsogbu nke linear ịtụ na-enye ohere Phantom n'ọtụtụ ọ bụla ngụkọta oge, gụnyere smart contracts.
Sompolinski na Zoha na-aghọta na n'ihi linear ịtụ, Phantom àjà azụmahịa nkwenye ọnụego, nke bụ elu na mbụ SPECTER protocol. Ma na-eme nnyocha na-aga idozi nsogbu a na-eme n'ọdịnihu na-arụ ọrụ.
One of Japan nnukwu ...
New York obodo atụmatụ ...
apụta Price: Great ...
Previous Post:Canada mbụ Blockchain ETF mma site regulators
Next Post:Litecoin bụ